Isbeddelka Cimilada Dunida: Hawooyinka Greenhouse Gases
HAWOOYINKA GREENHOUSES GASES-KA
Dhulka aynu ku noollahay wuxuu leeyahay hawo sidii buste ugu wareegsan, taas oo lagu magacaabay ‘ATMOSFEER’. Atmosfeerku kaalin wayn ayuu ka qaataa hab-sami u socodka cimilada dhulka; sidaa darteed waa miisaan uu Ilaahay SW ugu tala-galay in ay nololi ka suurta-gasho dhulka guudkiisa.
Atmosfeerku waxaa uu celiyaa kala bar kulka iyo ilayska (radiation) dhulka uga imanaya qorraxda si uu tamar (energy) ku filan u helo. Deedna dhulku; inta uu u baahan yahay mooyee inta dheeriga ah ayuu dib ugu celiyaa atmosfeerka (long wave radiation); waana kulka aan dareenno had iyo jeer. kolkaas atmosfeerku kulkii ka imanayay dhulka kala barna hawada sare (space) ayuu u sii tuuraa, barka kalena dhulka qudhiisa ayuu dib ugu celiyaa; halkaasna waxaaa ka dhasha isu dheelli-tirnaanta cimilada. Waa nidaam Rabbaani ah oo miisaaman; Ilaahayna ku ilaaliyay heerkulka dhulka oo celcelis ahaan qarniyaal badan ku sugnaa 140C, islamarkaasna atmosfeerka la’aantiis uu qabowgu ka badnaan kari lahaa celcelis ahaan -190C. Mahaddaasna waxaa Kaligiis Iska Leh Allaha Awoodda iyo Xikmadda Badan Leh.
GREENHOUSE - GHGs
Atmosfeerku waxaa uu ka kooban yahay hawooyin qoyaaan iyo qallaylba leh, waxaana ugu badan labada hawo ee kala ah: Nitrogen – 78%, iyo Oxygen – 21%, labadooduna isbeddelka cimilada amba heerkulka dhulka wax saamayn ah kuma lahan.
Waxa sida xooggan u saameeya heerkulka waa hawooyinka loo yaqaan Greenhouse Gases GHG oo ayagu leh moolikullo (molecule)qallafsan oo kulka qabsan kara, islamarkaasna dhulka dib ugu celin kara; saamayntaasna waa midda loo yaqaan ‘Greenhouse Gas Effect’ .
Uumi-biyoodka H20 oo ah cunsurka ugu badan greenhouse gases-ka, ayaa leh saamaynta ugu badan, nasiib wanaagna waa cunsur uusan bani-aadamku saamayn badan ku yeelan Karin badnaanshihiisa uu ku badan yahay atmosfeerka, yacni bani-aadamku xaddi badan oo biyo ah oo ka muuqan kara atmosfeerka ma uumi bixin karo.
Kaalinta labaad waxaa ku jira CARBON DIOXIDE CO2 (Kaarboon 2 Ogsayd), kaalinta saddexaadna METHANE CH4, waxaa kaloo la xaqiijinayaa in ay ayaguna jiraan: NITROUS OXIDE N2O, TROPOSPHERIC – OZONE, CLOROFLOUROCARBONS CFCs, CLOROFLOUROCARBONS – HCFCs, iyo HYDROFLOUROCARBONS – HFCs.
Waxaa xusid mudan in tan iyo xilligii kacaankii warshadaha; uu bani-aadamku saamayn weyn ku yeeshay kororka hawooyinkani ay ku sii kordhayaan ama ay ku sii badanayaan atmosfeerka, sidaa darteedna; hadduu Ilaahay SW Idmo; Bogga Wacyi-gelinta Isbeddelka Cimiladu wuxuu isku dayi doonaa in uu si gaar ah oo kooban qoraal uga sameeyo saamaynta bani-aadamka leeyahyay isbeddelka cimilada.
1. CARBON DIOXIDE – CO2: Hawadani aad ayay muhiim ugu tahay nolosha noolaha oo idil iyo deegaankaba. Waxay qayb weyn ka qaadataa hab-neefsiga noolaha iyo dhirta, qaraxa folkaanaha, iyo hawooyinka/dabaylaha badweynada. Waxaa la qiyaasaa in tan iyo 1750kii uu CO2 atmosfeerka ku kordhay 40%, wuxuuna ku sugnaan karaa boqolaal ilaa kumanyaal sano. Waa hawada ugu xooggan (64%) xagga saamaynta isbeddelka cimilada oo ; islamarkaana kala-bar xaddigeeda waxaa sabab u ah bani-aadamka.
2. METHANE - CH4: Methane waxay kuxigtaa CO2 xagga saamaynta (18%). Hawadani sida caadiga ah waxay ka dhalataa dhulka meelaha qoyan, beera-falidda, macdan qodidda iyo sidoo kale qiiqa gaadiidka. Tan iyo 1750kii waxaa lagu qiyaasaa in ay hawadani atmosfeerka ku siyaadday 150%, waxayna ku sugnaan kartaa ilaa iyo dhawr iyo toban sano. Saamaynta aadamaha ee hawadanna waxaa lagu qiyaasaa ilaa 60%.
3. NITROUS OXIDE - N2O: Hawadani 6% ayay uga qayb-qaadataa saamaynta isbeddelka cimilada.Falidda beeraha iyo bacriminta organnada noolaha, gubidda shidaalka sida warshadaha iyo gaadiidka, iyo weliba siyaabo kale ayay caadi ahaan hawadani ku soo baxdaa. Tan iyo 1750kiina waxay ku korortay atmosfeerka ilaa 20%, halkaas oo ay ku sugnaan karto boqol sano in ka badan. 40% bani-aadamka ayaa sabab u ah kororkeeda.
4. TROPOSPHERIC – OZONE (03): Hawadani waa mid aad khatar u ah, ka qayb qaadata isbeddelka cimilada, islamarkaasna halis ku ah neefsiga noolaha. Waxay hawadani ka dhalataa fa-gallada kiimikada ah, warshadaha iyo dhamaan matoorada guba shidaalka.
5. CLOROFLUOROCARBONS – CFCs, CLOROFLUOROCARBONS – HCFCs, PERFLUOROCAR BONS – PFCs, SULFUR HEXAFLUORIDE - SFs iyo HYDROFLUOROCARBONS – HFCs: Hawooyinkan oo loo inta badan loogu magac-daro ‘F-gases’ (Fluorinated Gases); waxaa loo adeegsadaa hawlo kala duwan sida: qaboojinta, dab-deminta, buufinta cayayaanka iwm. Hawooyinkani waxay atmosfeerka ku kala sugnaan karaan kumannaan sano.
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 4:12 PM